Soo dejisan Pinterest 1.9.5 – Vessoft
Network Bulshada, Photo
Soo dejisan Pinterest
Pinterest – software ah si ay isu waydaarsadaan iyo meesha images kala duwan ee shabakada bulshada. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan albums oo ku darto iyaga sanamyadiinna ama sawiro posted by dadka kale ee u gaar ah. Pinterest ku jira engine search fudud, taasoo keeneysa in la helo albums caan yihiin oo u qaybiyey qaybo kala duwan. Software ayaa u saamaxaaya in ay subscribe on users kale, la qiimeeyo si sawirro loo dar iyo faallooyinka iyaga. Pinterest sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad la wadaagto images maraya codsiyada kale ee lagu rakibay qalab user ka.
Exchange iyo meeleynta images
Awoodda in ay wadaagaan images marayo codsiyada kale
Pinterest Software la xiriira:
English, Українська, Deutsch, Русский... Hangouts 4.0.100406486